Mini Spy Camera - Efihlekile Pocket Pen Camera 170 Degree Wide Angle Lens (SPY018) | Izixazululo ze-OMG
Mini Spy Camera - Efihlekile Pocket Pen Camera 170 Degree Wide Angle Lens (SPY018)
Iqiniso le-1080P eligcwele le-HD eligcwele levidyo yevidiyo: I-1920x1080P ku-30fps naku-170 degree lens wide wide lens ukubamba umbono omkhulu ngesikhathi sokurekhoda. Futhi i-Wide Dynamic Range elungisiwe (WDR) ingaveza isithombe noma ividiyo engcono kakhulu ngokususelwa kubuchwepheshe obufanayo be-hd obugcwele.
Ukuxhumeka kwe-Wi-Fi nokubuka: Ukwakhiwa kwi-wifi module kwenza umsebenzisi asebenzise ikhamera ngokusebenzisa ifoni yeselula (i-Andriod noma i-platform ye-iOS ehambisanayo), lungisa i-angle yokubuka yekhamera, ukusakazwa bukhoma noma ukuthatha amavidiyo ngohlelo lokusebenza lokugcina lwe-Finalcam.
Idivaysi Yokuqopha Imisebenzi eminingi: Ukuqopha ngesandla amavidiyo noma ukuthatha izithombe usebenzisa ikhamera yesenzo; setha ukuqopha okuvezwayo okusetshenzisiwe okusebenzayo njengekhamera yokuphepha ekhaya noma uqale umsebenzi wokurekhoda womsindo usebenzisa i-dictaphone ngesikhathi sokuqopha komhlangano noma okuyisimungulu uma kudingeka.
Ibhethri evuselelekayo ekwakhiwe: Yakhelwe ku-560 mAh ibhethri elayishwayo, isikhathi sokuqopha ngesandla kuze kufike kumaminithi we-90, noma ngaphezulu kwamahora we-20 ukuze unamathisele ibhange lamandla wangaphandle le-10000mah (ibhange lamandla alifakiwe). Ikhamera idinga ikhadi le-sd ukuze lisebenze.
Smart futhi kulula ukuyisebenzisa: Ukufometha kwe-H.264 ukuqinisekisa ukuhanjiswa kwevidiyo okulula kakhulu; I-Loop Ukuqopha ihlelwe njenge-3 / 5 / 10 imizuzu yevidyo kliphu njengoba ufuna. Ukusekela kuze kufike ku-64GB ikhadi le-SD le-watermark yosuku nosuku. Ukusekela kwe-HDMI kutholakala (i-micro sd khadi nekhebula le-HDMI alifakiwe).
Bhalisa amavidiyo ngesandla noma uthathe izithombe usebenzisa ikhamera yesenzo.
Setha ukuqopha okuveziwe okuqoshiwe okusetshenziselwa ukusebenzisana njengekhamera yokuphepha ekhaya.
I-1920 x 1080P ku-30fps ne-170 degree i-angle enkulu yokubuka i-lens ukuze ithathe amehlo amakhulu ngesikhathi sokurekhoda.
Qala umsebenzi wokurekhoda womsindo usebenzisa i-dictaphone ngesikhathi somhlangano noma ukurekhoda kwevidiyo okuyisimungulu uma kudingeka.
I-wifi-module ye-wifi ikhiqiza umsebenzisi ukusebenzisa ikhamera ngefoni yeselula (i-Android noma i-platform ye-iOS ehambisanayo).
I-watermark yesikhathi / yevidiyo ilungiswa.Ukukhishwa kweHDMI kuyatholakala (ikhebula le-HDMI alifakiwe).
I-Loop Ukuqopha ihlelwe njenge-3 / 5 / 10 imizuzu yevidyo kliphu njengoba ufuna futhi isekela ikhadi le-SDN le-64GB (ikhadi le-SD alifaki).
I-WF92 eyakhelwe ku-560 mAh ibhethri elayishayo, ukurekhoda ngesandla kuze kufike emaminithini we-90, noma ngaphezulu kwamahora we-20 ukuze unamathisele ibhange lamandla wangaphandle le-10000mah (ibhange lamandla alifakiwe).
Ikhamera ye-HD ebonakalayo egcwele ebonakalayo:
I-1920x1080p ikhamera ye-spy efihlekile egqokekayo, okulula ukuyibeka kanye nokusetshenziswa okuphathekayo.
I-Wifi Function Ishicilelwe:
Ngokuxhumeka kwe-Wi-Fi ulungise i-angle yokubuka ikhamera, ukusakazwa bukhoma noma ukuthatha amavidiyo ngohlelo lokusebenza lokugcina lwe-Finalcam.
Ibhethri elungayo elakhiwe:
Yakhelwe ku-560 mAh ibhethri elayishiwe, ukurekhoda ngesandla kuze kube yimaminithi we-90.
4.5 x 1 x amasentimitha angu-0.6
Mini Spy Camera - Efihlekile Pocket Pen Camera 170 Degree Wide Angle Lens (SPY018) igcine ukuguqulwa: Okthoba 9th, i-2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-6472 Ukubuka kwe-1 Namuhla